Beechmont Mountain View Chalet - I-Airbnb
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguAllison
IBeechmont Mountain View Chalet likhaya elinomtsalane elibuyiselwe ngothando kwindawo entle efihlakeleyo, enoxolo kumda wehlathi elijonge iLamington National Park, iMt Warning Springbrook kunye neNtili yeNuminbah.
Le ndawo ezolileyo ikwenza ukwazi ukumamela iminxeba eninzi yeentaka kwaye ubukele izilwanyana zalapho ngaphandle kokuziphazamisa.
I-chalet inikezela ngeembono zabucala kunye nezingaphazamisekiyo kwindawo ejikelezileyo. Kwabo bafuna ukubaleka, i-chalet ibonelela ngayo yonke into onokuyifuna.
I-Chalet yindawo entle yothando, eyakhiwe ngamaplanga endalo kuyo yonke indawo, isenza indawo eyohlukileyo ngokwenene.
I-Chalet ine-spa eshushu yangaphandle kunye ne-BBQ kwiveranda engasemva enika eyona mbono iphefumlayo, engaphazanyiswa.
Iindwendwe zinokungqengqa kwiibhedi zelanga ngesiselo sakho osithandayo kwaye zonwabele ukuphuma okanye ukutshona kwelanga, okanye ujonge iMilky Way emangalisayo ebusuku ngeteleskopu. Kungenjalo, hlala emva kwaye wonwabele indawo yomlilo evulekileyo ngobusuku obubandayo.
Sinikezela ngebhodi ye-antipasto kunye nebhotile yeChampagne yendawo ekufikeni kwayo. Iti, ikofu, kunye nezinye izinto eziyimfuneko zibonelelwa ngesidlo sakusasa, kodwa iindwendwe ezineendwendwe ziyakhuthazwa kwizidlo ze-BYO. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo likwakhona ukuze lisetyenziswe ziindwendwe.
Iivenkile ezikufutshane ziyi-15 imizuzu ukuya eCanungra okanye imizuzu engama-25 ukuya eNerang. Sineendawo zokutyela ezimbini ezimangalisayo ezikufutshane, iFlying Bean kunye neBinna Burra Restaurant (ukubhukisha kuyafuneka), ngempelaveki sikwanayo neCafé yeNtloko, zonke zikwindawo yokuphosa iChalet. Nceda ujonge iiyure zokuvula ngokulandelelanayo njengoko ingezizo zonke ezivulekele izidlo zangokuhlwa.
Ummandla uneendlela ezimangalisayo zokuhamba ukonwabela iintyatyambo kunye nezilwanyana zasekhaya, iingxangxasi kunye nembonakalo ye-Scenic Rim (Iimephu zendlela yokuhamba zinikezelwe). Okanye ngokuqhuba okufutshane ungazifumana entliziyweni yeGold Coast ukonwabela iilwandle ezicocekileyo zasekhaya kwaye okanye nakweziphi na iipaki zoMxholo bonwabele ulonwabo. Le ndawo ikwaneeWineries ezininzi kunye neemarike ngoko ukonwabele ukuthatha ikhefu kwaye ujikeleze le ndawo intle.
Ndifumaneka ngeFowuni okanye ngeTeksti nangaliphi na ixesha ngexesha lokuhlala kwakho nathi. Ukuba kufuneka sibe kwindawo siya kuba lapho kwiyure enesiqingatha.